Ịṅụ sịga n'ime ime nwere nnukwu nsogbu
Mmepụ anya n'ihi ịṅụ sịga n'oge ime
Ọnụ ọgụgụ cancer na-abawanye ọ bụghị naanị na nne na-ese siga
Zere kpamkpam ịṅụ sịga n'ime ime
Dị ka otu ọnụ ọgụgụ si kwuo, gburugburu 30 pasent nke ndị na-ese siga ka na-eji sịga ha eme ihe na mmalite nke afọ ime. N'ime ndị a, ọkara n'ime ha na-ejikwa aka na-agbanye aka na-egbuke egbuke n'oge ọnwa mbụ nke afọ ime. Ịṅụ sịga n'oge ime nwa nwere nnukwu nsogbu ọjọọ.
Ịṅụ sịga n'ime ime - enwere ihe dị egwu
Maka ndị ọzọ, ihe dịka 15 pasent, Otú ọ dị, nicotine riri ahụ na-achọpụta ọtụtụ ndụ ha na-adị kwa ụbọchị na ha ga-emerụ nwa gị ahụ n'echeghị echiche.
Ịṅụ sịga n'ime ime dị ọcha!
Ihe mbụ ederede diaper na-ekpughe ibu ọkụ nke nne n'oge ime ime
Dị ka meconium - ma ọ bụ colloquially nakwa dị ka Kindspech - na-agbazi oche mbụ mgbe a mụsịrị nwa, nke nwa ahụ na-apụ. Ụdị ndị a amalitela site na ọnwa nke anọ nke ime ime. O nwere mmiri bile, nke mkpụrụ ndụ mucous, ma jiri mmiri mmiri na-amị, nke nwere ike ịnwe ihe gbasara akpụkpọ anụ na ntutu.
Nnyocha a egosila na ọ pụkwara ịchọta ndị na-emetọ ọrịa na ọgwụ metabolites nke e richaa n'oge ọnwa 6 ikpeazụ nke afọ ime. Otú ọ dị, a chọpụtaghị nkọwa nke oke anwụrụ ọkụ nke nne gosipụtara n'oge ime ime agaghị ekwe omume.
Dịka a na-atụ anya ya, ndị dọkịta na ndị ọkachamara na-enye ndụmọdụ megide ịṅụ sịga mgbe ha dị ime. Karịsịa, uto nke nwa ebu n'afọ nwere nsogbu na ihe ize ndụ nke oge akaghi aka, ma ọ bụ, n'ọnọdụ kachasị njọ, ọpụpụ na-amụbawanye n'ụzọ dị irè. Ọzọkwa, ihe ize ndụ nke nkwarụ dịka akụkụ aka ma ọ bụ akụkụ ahụ na-abawanye ụba.
Tụkwasị na nke ahụ, egosila na ụmụ ọhụrụ a mụrụ na ụmụ nwanyị nwere ime na-enwe nkezi na 200 gram karịa karịa na ime ime. Nke a bụ n'ihi na, n'ihi ịṅụ sịga, arịa ọbara ndị nne na-erughị.
Ya mere, ọkọnọ site na eriri ụbụrụ na-arịwanye elu na nwa ahụ na-enweta obere nri na ikuku oxygen nyere, nke nwere mmetụta na-adịghị adịgide adịgide na uto ya na mmepe ya. Tụkwasị na nke a, ihe ize ndụ nke ọrịa ma ọ bụ ọnwụ nwatakịrị bụ ihe okpukpu abụọ karịa elu.
Nnyocha e mere egosiwo na ụmụ nwanyị ime na-ese anwụrụ na-abanye 13 ugboro n'ụbọchị maka ụda ọkụ. N'ịbụ nke a na-agbakwunye oge nke ime ime ọnwa itoolu, nke a na-ebute banyere 3600 siga. Ọ bụrụ na ọbụna chemical 4000 dị na anwụrụ sịga, nke bụ akụkụ anụ ahụ na-egbu egbu na-egbu egbu, na-echebara ya echiche, ọ nwere ike bụrụ ihe ọjọọ.
Na-ese siga na-ewe a budata n'ihe ize ndụ ka a ọtụtụ ọrịa cancer na-azụ na-ogologo mara. Ma nwa na-etinye na ise siga mgbe ha dị ime, ntọala nkume e mesịrị ọrịa cancer. Na ekele na a ọmụmụ site German Cancer Research Center na umu nne ndị na-ese sịga n'oge ime, ma ọ bụ banyere otu 1,5 ugboro ọzọ yiri ka ọrịa cancer nke eriri afo na elu akụkụ okuku ume na tract. Na ọrịa cancer akpa ume, ọ bụ banyere 1,7-n'ogige atụrụ na ọbụna okpukpu atọ na ọ dịghị òkè cancer.
Ya mere, nkwubi okwu a bu nani na ndi inyom di ime kwesiri ịkwụsị ise siga. Nke a abughi nani ihe nwatakiri a bu n'afọ. Nne ga-enwe ike ịhụ ihe dị mma nke ịkwụsị ịṅụ sịga mgbe nanị awa ole na ole gasịrị. Ya mere, mgbe ihe dịka minit 20 gasịrị, a pụrụ ịhụ nkwụsị ọbara mgbali na obi obi. N'ime awa asatọ, ọkwa carbon monoxide na ọbara abanyela na akara. Nke a ga-ahụkwa nwa ahụ ngwa ngwa, n'ihi na ugbu a, ọ na-enweta ego zuru ezu nke oxygen na nri.
Otú ọ dị, mgbe ịkwụsịtụ siga, mmachibido ma ọ bụ ndụ ndị enyi na ndị ikom ime ime agaghị eche na ọ dịghị ihe ha mere. Ọzọkwa, ịṅụ sịga nke nne nwere ike imetụta nwa ahụ n'afọ. Ya mere, ezinụlọ nke ndị inyom dị ime na-anọkarị na-ese anwụrụ. N'ezie, a ga-ezere ịṅụ anwụrụ kpamkpam ọbụna mgbe a tụchara ime.
Kwụsị ise siga ahụ ike
Ịzụ nwa | Nwa na ime
Kwụsị ise siga - na-anọ anwụrụ
Kwụsị ise siga site na hypnosis
Kwụsị ise anwụrụ na-enweghị ihe mgbochi iwepụ
Mmanya na-aba n'anya n'ime ime
Iyi akwa ihu ime nwa